ကြားသိသမျှ Archives - Channel Lover
ဆူး​လေမီးပွိုင့်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦး ရုတ်တရက်လဲကျ​ကာ….(ရုပ်သံ)
March 13, 2022 by Channel Lover
ဆူး​လေမီးပွိုင့်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦး ရုတ်တရက်လဲကျ​ကာ….(ရုပ်သံ) ဆူး​လေမီးပွိုင့်တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦး လဲကျ​သေဆုံး ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေမီးပွိုင့်၌ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦး ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် လဲကျသေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက လူထုနွေဦးသို့ ပြောသည် ထိုယာဉ်ထိန်းရဲ သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်မှတ်တမ်းအရ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ဆူးလေ ဘုရားလမ်းဆုံရာ မီးပွိုင့်တွင် ဖြစ်သည် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သေတာလို့ သိရတယ်။သဲသဲ ကွဲကွဲတော့ မသိဘူး။ သေတာတော့ သေချာတယ်ဟု မဂ်လာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောသည် ဗီဒီယိုဖိုင်မှတ်တမ်းတွင် လဲကျသေဆုံးသူ ယာဉ်ထိန်းရဲ ကို စစ်ကောင်စီရဲတပ်သားများက လာရောက်စစ်ဆေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည် unicode ဆူး​လမေီးပှိုငြ့တှငြ ယာဉထြိနြးရဲတစြဦး ရုတတြရကလြဲကွ​ကာ….(ရုပသြံ) ဆူး​လမေီးပှိုငြ့တှငြ ယာဉထြိနြးရဲတစြဦး လဲကွ​သဆေုံး ရနကြုနမြှို့လယြ ဆူးလမေီးပှိုငြ့၌ စစကြောငစြီလကအြောကခြံ ယာဉထြိနြးရဲတစြဦး ယနေ့ နလေ့ယပြိုငြးတှငြ … Read more
US အစိုးရ ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်း ထောက်ပံ့မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိလိုတဲ့သူတွေအတွက် သိထားသင့် ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်ကောင်းတခုပါ
US အစိုးရ ဒေါ်လာ ၁၃၆ သန်း ထောက်ပံ့မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိလိုတဲ့သူတွေအတွက် copy ယူလာပေးတယ် သိထားသင့် ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်ကောင်းတခုပါ အမေရိကန်အစိုးရဘက်ဂျက် ၂၀၂၂ နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု (၁) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဘက်ဂျက်ကို မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့မှာ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်စလုံးက တခဲနက်ထောက်ခံအတည်ပြုလိုက်တာမို့ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဥပဒေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်က အောက်တိုဘာလမှာ စပြီး စက်တင်ဘာလမှာ အဆုံးသတ်တာမို့ ဒီ ဘတ်ဂျက်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ အစိုးရရဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်များအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ … Read more
ကောင်းမှုတော်စေတီမှ စည်တော်ကို လောကီအစီအရင်များ ပါဝင်သည်ဟုဖယ်ရှားရန် စစ်ကောင်စီ ကြိုးပမ်း
March 12, 2022 by Channel Lover
လောကီအစီအရင်များ ပါဝင်သည်ဟု သတင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဧရာမ စည်ကြီးတစ်လုံး စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်စေတီရင်ပြင်မှ ဖယ်ရှားခံရပြီး လှူဒါန်းခဲ့သူ၏ဒေသသို့ ပြန်ရောက်ဖွယ်ရှိနေသည် အာဏာသိမ်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကြောင့် အပြောင်းအလဲများစွာ ဆက်တိုက်ပေါ်ပေါက်နေရာ များမကြာမီ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပြောင်းလဲမှုမှာ နာမည်ကျော်စေတီတစ်ဆူနှင့် ပတ်သက်နေသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)အစိုးရလက်ထက်က စစ်ကိုင်းမြို့အနီး ရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်စေတီ ပရိဝုဏ်အတွင်း တည်ထားခဲ့သော စည်ကြီးတစ်လုံးကို ဖြုတ်ချဖယ်ရှားရန် စစ်ကောင်စီက ပြင်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ပန်းပုဆရာတစ်ဦးက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဖြစ်ဖွယ်ရှိသော သစ်တစ်လုံးထွင်းစည်ကြီးကို သီတဂူဆရာတော် ဦးဉာဏိဿရ၏ ၈၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ထွင်းထုလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ဆရာတော်က ထိုစည်ကို မဟာဘေရီ ခေါ် အဓိကဒုန္ဒုဘ စည်တော်ကြီးဟု အမည်တပ်ခဲ့ပြီး ကောင်းမှုတော်စေတီ၏ အနောက်တောင်ထောင့်တွင် ညောင်ရမ်းခေတ်ပုံစံ အဆောက်အအုံတစ်ခုဆောက်လုပ်၍ ၂၀၁၉ မတ် ၁၉ … Read more
“ကိုယ့်ကလေး ကို မြင်တိုင်း လန့်လန့်ပီး အော်ငိုငို နေတဲ့ ကလေးသာသာ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ဆိုး”
ပိုးကိုက်ပန်းမို့ မလန်းစေချင် 😥 သမီးလေးရယ် ငါ့ရင်တွေကျိုးရချည်ရဲ့အေ ကလေးအရွယ်လေးက ကလေး လာမွေးသတဲ့လား ညည်းအသက်က ခုမှ ၁၃ နှစ်တောင်ပြည့်သေးတာမဟုတ် ညည်းက တခြားမိန်းမသားတွေလို သာမန်မှမဟုတ်တာဟယ် ညည်းကိုညည်းရော သိရဲ့လားအေ မွေးရာပါ ဦးနှောက်ရော ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပါ အားနည်းတဲ့ ဒေါင်းရောဂါသည်လေ (Down^s Syndrome) ညည်းလို ဘာမှ မသိ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာတွေးလို့တွေးမှန်းတောင် မသိတဲ့ ကလေးလေးကို ခွေးစိတ်ပေါက်ပီးတစ်ခါ နှစ်ခါ အခါခါ စော်ကားတဲ့လူက ညည်းပထွေးတဲ့ ငါတို့မှာတော့ လျှာ ကျွတ်အောင် တောက်ခေါက်ပီး အံကြိတ်နေယုံ မှတစ်ပါး အခြားမတတ်ဘူးလေ ညည်းအမေကရော် သူ့ရဲ့သမီးအရင်းကို သူ့ရဲ့နောက်လင်က အ့လို တွေ လူမဆန်အောင် ပြုမူနေတာတွေကို မမြင်မျက်စိ မကြားနား မသိစိတ် နဲ့ပဲ … Read more
“ကြည့်မိသူတိုင်း မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ PDF လူငယ်လေး နှင့် မိခင်ဖြစ်သူတို့ ရဲ့ Video call မှတ်တမ်း(ရုပ်သံ)”
Junior Zaw ဆိုတဲ့ PDF လူငယ်လေး တစ်ယောက်က မတွေ့ရတာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာပြီဖြစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် Video call ပြောဖြစ်တာလေးကို ခုလို တင်ထားပါတယ် “ကျနော်ရဲ့…အမေ ❤ သားဖြစ်သူကျနော်က Android Phone ကိုင်တယ် အမေကမသုံးတတ်မကိုင်တတ်တော့ခလုတ်ဖုန်းလေးကိုင်တာပေါ့… အမေမျက်နှာ​လေးမမြင်ရပဲ အသံလေးနဲ့ နေကောင်းရဲ့လား အမေ…ကျန်းမာရဲ့လား အမေ… အစစအရာရာဂရုစိုက်နော်လို့ အသံလေးနဲ့ပဲကြားခဲ့ပြောခဲ့ရတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီ… အခုတော့ကံကောင်းစွာနဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကူညီကြောင့် အမေမျက်နှာလေးပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ် တွေ့တွေ့ချင်းအမေမျက်နှာလေးဆချာင်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ် မျက်ရည်တွေမထိန်းနိုင်ပဲကျလာတယ် အမေရှေ့မှာငိုရင် အမေပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုးလို့ စကားကိုမနည်းထိန်းပြောရတယ် ရှေ့တန်းရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ စကားအကြာကြီးတောင်မပြောလိုက်ရပဲ ကန်တော့ပြီးတော့ အမေပေးတဲ့ဆုလေးယူပြီးဖုန်းချလိုက်ရတယ်…. အမေမှာတဲ့အတိုင်း သားအမေဆီဆက်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပေးပါနော်လို့စကားကို သားကတိတည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ် အမေ အခုတော့ သားလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကို သားဆုံးအောင်လျှောက်လိုက်ပါဦးမယ် အမေ… အမေမငိုပါနဲ့နော် အမေငိုရင်သားရင်တွေကွဲရလို့ပါ အမေ….😔 သားဆက်ဆက်အမေရှိတဲ့အိမ်လေးဆီပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်… 🙏🙏🙏 … Read more
ကလေးဘဝလေးမှာ အမြန်ဆုံး လွတ်လပ်စွာ ပျော်ရွှင်ဆော့ကစားနိုင်ပါစေ …..
ရပ်ကွက်ထဲ စည်ပင်ဝန်ထမ်းကို လာဖမ်းတဲ့အချိန် မမိလို့ အမေ၊ မိန်းမ နဲ့ ကလေးကို ဖမ်းလာတယ်လို့ ကျွန်မပြောပြတဲ့ ကလေးလေးပါ။ အဖွားနဲ့အမေလုပ်သူက ဆန္ဒမပြ နိုင်ငံရေး မလုပ်ပါဘူး လို့ ငြင်းသမျှ … အဲ့ကလေးရှေ့ ” စစ်အာဏာရှင် “ လို့ ပြောလိုက် သူက ” အလိုမရှိ” လို့ နောက်က ပါပြီးသား ။ သူ့အမေ အမြဲပြောတဲ့စကားရှိတယ် ငါတို့က သူ့ကြောင့် အဖမ်းခံလာရတာပါဟယ် တဲ့။ အပြင်မှာ ပြေးလွှားကစားနေရမယ့် အရွယ်လေးဟာ ထောင်တွင်းမှာ လူပေါင်းစုံကြား အတတ်ပေါင်းစုံလည်း တတ်ပြီး အမေနဲ့အဖွားကို အရွယ်နဲ့မမျှ သိတတ်လွန်းတဲ့ ကလေးလေး ။ အချိန်တွေကြာ နေသားကျလာတော့ ထောင်ရဲ့အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ ဓလေ့တွေကို သိလာတယ်။ အခန်းဖွင့် … Read more